Dowladda oo ka hadshay sidii lagu sii daayay horjooge Ciise Tarabuun – Radio Daljir
Dowladda oo ka hadshay sidii lagu sii daayay horjooge Ciise Tarabuun
Seteembar 30, 2019 7:08 b 0
War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta, kuna saxiixnaa Wasiir kuxigeenka Warfaafinta Aadam Isaaq ayaa lagu sheegay in Ciise Tarbuun oo magaciisa dhabta yahay C/waaxid Khaliif Cabdi uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo dhameystay xukun Maxkamadeed.
Aadan Isaaq ayaa sheegay in Ciise Tarbuun loo xiray sanadkii 2017 eedeymo la xiriira fal argagixisnimo, dacwadiisa ay qaaday Maxkamadda Ciidamada, laguna xukumay 2 sano oo xarig ah.
Inkastoo wasiir kuxigeenka uu sheegayo in ninkan la xukumay, hadana bishii June ee sanadkii 2017 oo ahaa xilligii la qabtay ayay dowladda ku tilmaamtay inuu yahay Madaxii Amniyaadka Al-Shabaab u qaabilsan Muqdisho, isla markaana loo heysto dilal badan oo amarkooda uu lahaa, wixii markaas ka dambeeyay lama soo bandhigin maxkamadeyntiisa, mana lala wadaagin warbaahinta, sida haatan ay dhacdo xukunada ay fuliso Maxkamadda Ciidamada.
Booliska Kenya ayaa baadigoobaya Mr C/waaxid, kaasoo la sheegay in 24-kii bishan uu gudaha u galay dalkooda, waxaana ay shacabkooda ku wargeliyeen inay u soo sheegaan cidii aragta saldhigga ugu dhow.
Si kastaba ha ahaatee waxaa weli taagan su’aalaha ay dadka qabaan ee ah in markii hore dowladda Soomaaliya ku faantay soo qabashada ninka iyo in markii la soo qabtay shir jaraa’id uu qabtay Wasiirka Amniga, kaddib shir degdeg ah oo Golaha Wasiirada ka yeesheen.
Xulashada Daljir & Cabdifataax Cabdilaahi, Daljir Garoowe (dhegayso)
Taliyihii hore ee NISA Cabdalla Cabdalla“ Ciise Tarabuun miyaa maanta dood lagakeenay inuu Alshabab yahay?